XOG : Waa Kuma Shaqsiga Lagu Badalayo RW Kheyre iyo Beesha uu Kasoo Jeedo... | Allbanaadir News	XOG : Waa Kuma Shaqsiga Lagu Badalayo RW Kheyre iyo Beesha uu Kasoo Jeedo...
XOG : Waa Kuma Shaqsiga Lagu Badalayo RW Kheyre iyo Beesha uu Kasoo Jeedo…
Iyadoo ay jirto xanta ah iney suurta gal tahay in xilka laga qaado Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa hadana shacabka Soomaaliyeed waxay saadaalinayaan shaqsiga lagu badeli karo ka dib xil ka qaadistiisa.
Qaar ka mid ah shacabka ayaa isla dhexmaraya in haddii ay dhacdo in xilka laga qaado Ra’iisal wasaare Kheyre xilkaasi laga soo xuli doono shaqsiga qabanaya Beesha habar gidir oo hadda qeylada ugu badan ee Dowladda ka taagan tahay.
Beesha Habar gidir oo markii hore loo balan qaaday xilkaasi balse ay sheegeen inuu madaxweyne Farmaajo balanta uga baxay ayaa hadda ku adkeysanaya in xilkaasi beel iyaga ahayn loo caleema saari doonin.
Inkastoo la ogeyn shaqsiga ay ishaartu qabaneyso,balse waxaa jira siyaasiyiin caan ah oo Beesha ka soo jeeda oo u hanqal taagaya xilkaasi Ra’iisal wasaarenimo waa haddii ay uu xilkaasi laga qaado Xasan Cali Kheyre oo hada cago badan ku taagneyn.
Shacabka Soomaaliya ayaa badi qaba in waxqabadka Ra’iisal wasaare Xasan Cali Kheyre uu yahay mid sugan una qalmo inuu la dhameysto madaxweyne Farmaajo.